Badbaadada, Kaniisadda Caalamiga ah ee God Switzerland (WKG)
Badbaadadu waa dib u soo celinta xiriirkii aadanaha ee Ilaah iyo furashada abuurkasta oo ka timaada addoonsiga dembiga iyo dhimashada. Ilaahay badbaadintu kaliya kuma siinayso nolosha hadda jirta, laakiinse waara weligeedba qof kasta oo aqbala Ciise Masiix inuu yahay Sayid iyo Bixiyaha. Badbaadadu waa hadiyad ka timid xagga Ilaah, oo ay suurto gal tahay nimco, oo lagu bixiyo iimaanka xagga Ciise Masiix, oo aan lagu kasbadin wanaag ama shaqooyin wanaagsan. (Efesos 2,4-10; 1 Korintos 1,9; Rooma 8,21-23; 6,18.22-23)
Badbaadinta - hawlgal badbaadinta!
Badbaadinta, furashadu waa hawl samatabbixin ah. Si aan ugu dhowaano ereyga "badbaadada" waxaan u baahan nahay inaan ogaano seddex waxyaabood: waxa dhibku ahaa; wixii Ilaahay ka qabtay; iyo sida aan uga jawaab celin karno.
Waa maxay nin waa
Markuu Eebbe abuuray nin, wuxuu ku abuuray “araggiisa” wuxuuna uumay abuurkiisa "aad u wanaagsan" (Bilowgii 1: 1,26-27 iyo 31). Dadku waa uun abuur cajiib ah: laga abuuray boodh, laakiin waxaa ku tarmay neefta Ilaah (Bilowgii 1:2,7).
"Sawirka Ilaah" waxaa laga yaabaa inuu ku jiro garaadka, awooda hal abuurka iyo rabshadaha abuuritaanka. Iyo sidoo kale awooda lagu sameeyo cilaaqaad iyo go'aanno niyadeed. Siyaabo qaarkood, annagu waxaan nahay sida Ilaah laftiisa Maxaa yeelay Ilaah wuxuu leeyahay wax gaar ah oo innaga gaar ah, carruurtiisuba.
Buugga koowaad ee Muuse wuxuu inoo sheegayaa in dadkii ugu horreeyay ay sameeyeen wax Ilaah ka mamnuucay inay sameeyaan (Bilowgii 1: 3,1-13). Xadgudubkoodii wuxuu muujiyey inaysan iyagu Ilaahay aaminin; oo waxay xadgudub ku ahayd kalsoonidiisa iyada. Rumaysad la'aantoodii waxay xumeeyeen xiriirkii waxayna ku guuldaraysteen inay sameeyaan wixii Eebbe ka rabay inay sameeyaan. Natiijo ahaan, waxay lumeen xoogaa cibaadada ah. Natiijada, Ilaah wuxuu yidhi, waxay noqon doontaa: halgan, xanuun, iyo geeri (Aayadaha 16aad). Haddii aysan raacin inay raacaan awaamiirta Abuuraha, waxay ku qasbanaadeen inay dhex maraan Dooxada Ilmada.
Dadku waa sharaf iyo aasaas isla waqti isku mid ah. Waxaan yeelan karnaa himilooyin sare oo aan wali caqabad ku noqon karno. Waxaan nahay ilaah-la mid ah isla mar ahaantaana aan cibaado nahay. Mar dambe kuma nihin "ruuxdii abuurtay". In kasta oo "aan nafteenna halaagnay", haddana Ilaah weli wuxuu moodayaa inaan nahay sawirro Ilaah (Bilowgii 1:9,6). Awoodda ay u lahaan karto cibaadada wali wey jirtaa. Taasi waa sababta uu Eebbe u doonayo inuu na badbaadiyo, taasina waa sababta uu isagu u doonayo inuu na badbaadiyo oo dib u soo celiyo xiriirkii uu inalalahaa.
Ilaah wuxuu doonayaa inuu na siiyo nolosha weligeed ah, oo aan xor ahayn, oo ah nolol ku habboon shuruudaha Ilaah iyo midba midka kale. Wuxuu doonayaa in caqligeenna, hal-abuurka iyo xooggeena loo isticmaalo wanaagga. Wuxuu doonayaa inuu innaguna noqdo sida isaga oo kale, inaan xitaa ka wanaagsan nahay dadkii hore. Taasi waa badbaadada.
Markaa waxaan u baahan nahay gurmad. Oo Ilaah baa na badbaadiyey - laakiin si aan qofna filan karin. Wiilka Ilaah wuxuu noqday bini aadamka, wuxuu ku noolaa nolol ka xor ah dembiga, oo waannu dilnay. Taasina - Ilaah baa yidhi - waa badbaadada aan u baahan nahay. Waa maxay caqli badan! Waxaa badbaadiyay dhibbane. Abuureheennu wuxuu noqday hilib si uu ugu beddelo ciqaabteena. Ilaah baa sara kiciyey, oo wuxuu xagga Ciise inoogu ballanqaaday inuu inoo horseediyo sarakicidda.
Dhimashadii Ciise iyo sarakiciddiisa ayaa muujinaya oo dhimashada iyo sarakicidda aadanaha oo dhan suurta gal ka dhigaya. Dhimashadiisu waa waxa qaladaadkeenna iyo qaladaadkeennu mudan yihiin, oo sidii Abuuraheenna ah, wuu inaga badbaadiyey khaladaadkeenna oo dhan. In kasta oo uusan u qalmin geeri, haddana wuxuu si aqbalaad ah u aqbalay halkii aan joogno.
Ciise Masiix baa inoo dhintay, oo isagana isagaa loo sara kiciyey (Rooma 4,25). Isaga ayaa nafteennii hore uu dhintay oo isaga waxaa la soo qaatay qof cusub oo nool (Rooma 6,3-4). Hal dhibbane, wuxuu u adeegay xukunka dembiyada "adduunka oo dhan" (1 Yooxanaa 2,2). Bixinta ayaa horeyba loo sameeyay; Su’aashu hadda waa sidee ayaan uga faa'iidaysan karnaa? Ka qayb qaadashadayada qorshaha waxaa lagu sameeyaa tawbadkeen iyo iimaan.
Ciise wuxuu u yimid inuu u yeero dadka inay toobad keenaan (Luukos 5,32); (Loogu talagalay Luther, "toobad" badiyaa waxaa loo tarjumaa "basas"). Butros wuxuu codsaday in la toobad keeno oo loo beddelo Eebbe dambi dhaaf (Falimaha Rasuullada 2,38:3,19;). Bawlos wuxuu dadka kula taliyay inay "Ilaah u toobad keenaan" (Falimaha Rasuullada 20,21, Elberfeld Bible). Toobaddu macnaheedu waa: ka leexashada dembiga, oo loo noqdo Ilaah. Bawlos wuxuu dadka Ateniyiinta ku wacdiyey in Eebbe ka indho tirayo sanam caabuda, laakiin hadda "wuxuu dadka ku amrayaa in nin walbaba toobad keeno" (Falimaha Rasuullada 17,30). Waxaad dhahdaa waa inaad ka fogaataa sanamka.
Bawlos wuxuu ka walwalay in qaar ka mid ah Masiixiyiinta reer Korinti ay awoodi waayaan inay ka toobad keenaan dembiyadooda sinada ah (2 Korintos 12,21). Dadkan, tawbadkeenku wuxuu ula jeeday diyaarka ah in la joojiyo sinada. Sida uu sheegayo Bawlos, ninku waa inuu "ku kacaa camal wanaagsan oo saafiya", taasi waa, caddee xaqiiqnimada toobaddiisa camal ahaan (Falimaha Rasuullada 26,20). Waxaan badalnaa maskaxdeena iyo dhaqankeena.
Aasaaska baridayadu waa "ka toobadkeenidda shuqullada kuwii dhintay" (Cibraaniyada 6,1). Tan macnaheedu maahan kaamil ahaan bilowgii - Masiixiyuhu ma aha kaamil (1Joh1,8). Toobaddu macnaheedu maahan inaan horay u gaarnay hadafkeenna, laakiin waxaynu bilaabeynaa inaan qaadno jihada saxda ah.
Annaguna hadda kuma noolaano nafteenna, laakiin Badbaadiyeheenna Masiixa (2 Korintos 5,15; 1 Korintos 6,20). Bawlos wuxuu noo sheegayaa: "Sida aad gacmahaaga ugu dhiibteen cibaado iyo xaqdarro weligoodba xaqdarro cusub, haatan lugahaaga u dhiib adeegga caddaaladda si ay iyaguna quduus u ahaadaan" (Rooma 6,19).
Si fudud loogu yeero dadka inay toobad keenaan kama badbaadinayso dhicitaankooda. Dadka waxaa loogu yeeray inay addeecaan kumanaanta sano, laakiin wali waxay u baahan yihiin badbaadin. Qayb labaad ayaa loo baahan yahay, taasina waa aaminaad. Axdiga Cusubi wax badan ayuu ka sheegayaa iimaanka marka loo eego toobadda (Toobad keena) - Erayada caqiidada waxay soo baxaan wax ka badan sideed jeer in ka badan.
Ku alla kii rumaysta Ciise waa la cafiyey (Falimaha Rasuullada 10,43). "Rumayso Rabbi Ciise, adiga iyo reerkaaguba waad badbaadi doontaa!" (Falimaha Rasuullada 16,31.) Injiil "waa awood Eebbe barakeeyo kuwa rumeysan oo dhan" (Rooma 1,16). Masiixiyiintu waa rumaystayaal caan ah, mana qoomameeyaan. Astaamaha lagu garto waa aaminaad.
Waa maxay macnaha "rumaynta" - aqbalaadda xaqiiqooyinka qaarkood? Ereyga Griigga waxaa loola jeedaa aaminsanaanta noocan ah, laakiin inta badan waxay leedahay macnaha ugu weyn "aaminaad". Markuu Bawlos noogu yeedhay inaan rumeysanno Masiixa, asal ahaan isagu maahan macnaha dhabta ah. (Ibliiskuna sidoo kale wuu ogyahay xaqiiqooyinka ku saabsan Ciise, laakiin wali lama badbaadin.)
Haddii aan rumeysan nahay Ciise Masiix, annagaa kalsooni ku qabna. Waan ognahay inuu yahay nin aamin ah oo aamin ah. Waxaan ku kalsoonaan karnaa inuu isagu ina daryeelayo, oo uu na siinayo wixii uu ballanqaaday. Waxaan ku kalsoonaan karnaa inuu inaga badbaadin doono dhibaatooyinka ugu xun ee aadanaha. Haddii aan isku hallaynno badbaadada, waxaan qiraynaa inaan u baahan nahay caawimaad oo isagu wuu na siin karaa.
Rumaysad sidan oo kale ahi nama badbaadiyo - waa inay noqotaa rumayn isaga, ee ma aha wax kale. Annagaa isku aaminay isaga wuuna ina badbaadiyaa. Markaan aaminno Masiixa, waxaan joojinaa isku halleeynta nafteena. In kasta oo aan ku dadaalno dabeecad wanaag, ma aaminsani in dadaalladeenna ay na badbaadi doonaan ("Dadaal dadaal" qofna weligiis kama uusan dhigin wax qumman). Dhanka kale, kuma niyad jabno marka dadaalladeenna ay dhacaan. Waxaan aaminsanahay inuu Ciise ina keenayo badbaadada, ee ma ahan inaan nafteena u shaqeyno. Waxaan ku kalsoonahay isaga, oo aan ku saleyneynin hanteenna ama guuldarradeenna.
Iimaanku waa dhaqaajinta toobadda. Haddii aan aaminsanahay Ciise inuu yahay Bixiyahayaga; markaynu ogaanno inuu Ilaahay innaga jecel yahay oo isagu Wiilkiisa u soo diray inuu innaga dhinto; markii aan ogaanno inuu isagu wanaag noo doonayo, waxay ina siinaysaa diyaar u ahaanshaha inaan isaga ugu noolaano oo aan isaga ka farxinno. Waxaan go’aansannaa: Waxaan iska daynaa noloshii caqli xumada iyo jahwareerka aheyd ee aan hogaamineynay oo aan aqbalnaa micnaha Eebbe siiyay, jihada Eebbe ku siiyay iyo jihaynta nolosha.
Rumaysad - taasi waa isbedelka gudaha ee ugu muhiimsan. Rumaysadkeenu "kama shaqeeyo" annaguna waxba kuma soo kordhiyo wixii Ciise noo "shaqeeyay". Rumaysadku si fudud ayaa ah rabitaan in laga jawaabo waxa ay qabatay. Waxaan nahay sidii adoomo ku shaqaynaya dhoobada dhoobo ah, oo ah addoommadii Masiixu ku naadiyo oo yidhi, Waxaan idinku soo iibsaday lacag la’aan. Waxaan xor u nahay inaan ku jirno godka dhoobada ama inaan isaga aaminno oo aan uga tagno godka dhoobada. Madax furasho ayaa dhacday; annaga ayay na saaran tahay inaan aqbalno oo aan u dhaqmno si habboon.
Badbaadadu macno ahaan waa hadiyad ka timid Ilaah: Ilaah wuxuu ina siiyaa nimcadiisa, deeqsinimadiisa. Ma kasban karno waxkastoo aan qabanno. "Waayo, nimcadiinna waxaa laydinka badbaadiyey rumaysad, mana aha xagga xaggiinna, waa hadiyadda Ilaah, ee ma aha xagga shuqullada, si aan qofna ugu faanin" (Efesos 2,8: 9). Iimaanku sidoo kale waa hadiyad ka timid xagga Ilaah. Xitaa haddii aan u hoggaansanno si sax ah laga bilaabo waqtigaas wixii ka dambeeya, uma qalmin abaalmarin (Luukos 17,10).
Waxaa naloo sameeyay shaqooyin wanaagsan (Efesos 2,10), laakiin shaqooyinka wanaagsan nama badbaadin karaan. Waxay raaceen badbaado laakiin ma keeni karaan. Sida Bawlos leeyahay: Haddii sharciyada la badbaadin lahaa, Masiix wuxuu u dhiman lahaa si aan micne lahayn (Galatiya 2,21). Nimcadu nama siiso liisanka dembiga, laakiin waxaa la ina siiyay innagoo weli dembi ah (Rooma 6,15; 1Joh1,9). Haddii aan qabanno shaqooyin wanaagsan, waa inaan Ilaah u mahadnaqno maxaa yeelay isagu isaguu ku dhex sameeyaa (Galatiya 2,20; Filiboy 2,13).
Ilaah "ayaa inagu farxiyay oo loogu yeedhay yeedh Quduus ah, mana aha sida shaqooyinkeenna ay yihiin, laakiin go'aankiisa iyo nimcada kadib" (2Tim1,9). Ilaah "waa na badbaadiyey - cadaalad darrada aan sameynay darteed, laakiin naxariistiisa" (Tiitos 3,5).
Nimco waa wadnaha injiilka: waxaan ku helnaa badbaado sidii hadiyad xagga Eebbe ah, ee ma ahan howlaheena. Injiilku waa "ereyga nimcadiisa" (Falimaha Rasuullada 14,3:20,24;). Waxaan aaminsanahay "in lagu badbaadiyo nimcadii Rabbi Ciise" (Falimaha Rasuullada 15,11). Waxaannu "ku samaynaynaa caddaalad nimcadiisa xagga badbaadada xagga Ciise Masiix ee aan mudnayn." (Rooma 3,24). Nimcada Ilaah la'aanteed, waxaan dhaafi lahayn badbaadin dembi iyo dambi.
Badbaadadeenu waxay kuxirantahay wixii Masiixu qabtay. Isagu waa Badbaadiyaha, kan na badbaadiya. Kuma faani karno addeecitaankeenna maxaa yeelay had iyo jeer waa mid aan fiicnayn. Waxa kaliya ee aan ku faani karno waa waxa Masiixu sameeyay (2 Korintos 10,17: 18) - wuuna u sameeyay qof walba, annaga keliya maahee.
Badbaadada waxaa lagu sharaxay Kitaabka Quduuska ah ereyo badan: madax furasho, madax furasho, cafis, dib u heshiisiin, caruurnimo, xaq ka dhigid, iwm Sababta: dadku waxay dhibaatooyinkooda ugu arkaa siyaabo kala duwan. Haddii aad dareento wasakh, Masiixu wuxuu ku siinayaa nadiifin. Hadaad dareento inaad tahay adoon, waad iibsan kartaa tigidh; ku alla kii dareema inuu dembaabaa waa cafi.
Kuwa dareemaya inay ka go'een ama dib u noqdeen waxaa la siiyaa dib-u-heshiisiin iyo saaxiibtinimo. Kuwa dareema inay yihiin wax aan qiimo lahayn waxay siisaa dareen cusub oo kalsooni leh oo qiimo leh. Kuwa aan dareemin inay ka tirsan yihiin meel kasta waxay bixiyaan badbaado carruurnimo iyo dhaxal ahaan. Haddii aad dareento wax aan macno lahayn, waxaad siinaysaa macno iyo ujeeddo. Wuxuu nasasho siiyaa kuwa daalan. Isagu nabad buu siiyaa kuwa laga cabsado. Waxaas oo dhan waa badbaadada, iyo in ka sii badan.
Aynu si dhow u eegno hal eray: qiil. Ereyga Griigga wuxuu ka yimid qeybta sharciga. Caddaaladda waxaa looga hadlaa "ma ahan dambiile". Waa la dejiyay, la dhaqanceliyaa, waa la siidaayay. Markuu Eebbe ina caddeeyo, wuxuu caddeeyaa in dembiyadeenna aan mar dambe loo tiirin. Koontada amaahda ayaa dib loo bixiyay.
Haddii aan aqbalno inuu Ciise inoo dhintay, haddii aan qirano inaan u baahan nahay Badbaadiye, haddii aan garwaaqsanno inuu dembigeennu u qalmo ciqaab iyo in Ciise qaatay ciqaabta annaga, markaas waxaan leenahay iimaan oo Ilaah ayaa ina dammaanad qaaday. in nala cafiyo.
Ma jiro qof lagu caddayn karo - inuu xaq yahay lagu caddeeyey "shuqullada sharciga" (Rooma 3,20) maxaa yeelay sharcigu ma badbaadinaayo. Kaliya waa dabaq yar oo aanan ku noolayn; qofna kuma noolaan heerkaan (V. 23). Ilaah wuxuu xaq ka dhigayaa "kan rumaysadka ku jira Ciise" (V. 26). Binu-aadmiga wuxuu xaq u noqdaa “iyada oo aan shuqullada sharciga lahayn, rumaysad lagu helo oo keliya” (V. 28).
Si loo muujiyo mabda'a "xaq ka dhigida rumaysadka", Bawlos wuxuu soo xiganayaa Ibraahim: "Ibraahim wuu rumeeyey Ilaah, oo waxaa lagu tiriyey xaqnimo" (Rooma 4,3: 1, xigasho ka timid Bilowgii 15,6). Maxaa yeelay Ibraahim wuxuu isku halleeyey Ilaah, Ilaahna wuxuu tiriyey inuu xaq yahay. Tani waxay ahayd waqti dheer ka hor intaan la aasaasanin qawaaniinta sharciga, caddeyn in xaq ka timaada tahay nimco xagga Ilaah ka timid, oo lagu helo iimaan, oo aan lagu kasbaday ilaalinta sharciga.
Caddaaladdu way ka badan tahay cafiska, waxay ka badan tirtirka xisaabta deynta. Caddaaladdu macnaheedu waa: hadda wixii hadda ka dambeeya waxaa loo tixgeliyaa caddaalad, waxaan u taaganahay sidii qof wax uun sameeyey. Xaqnimadeenu kama timaado shuqulladayada, laakiin xagga Masiix (1 Korintos 1,30). Markuu rumeysan yahay Masiixa, Bawlos wuxuu qorayaa, qofka rumaystahu wuxuu noqonayaa mid xaq ah (Rooma 5,19).
Xitaa "cilaaqaadka" ayaa lagu heli doonaa "iimaankiisa in lagu tiriyaa caddaaladda" (Rooma 4,5). Dembiilaha Eebbe isku halleeya waa uun Ilaah hortiisa (waana la aqbali doonaa Xukunka Ugu Dambeeya). Kuwa Ilaahay isku halleeya mar dambe ma doonayaan inay noqdaan cibaadolaawe, laakiin kani waa natiijo, ma aha sabab badbaadada. Bawlos waa ogyahay oo ku nuuxnuuxsaday si isdaba joog ah "in ninku uusan ku samayn inuu xaqnimo ku sameeyo shuqullada sharciga, laakiin uu ku rumaysto Ciise Masiix" (Galatiya 2,16).
Dadka qaar ayaa markiiba rumaystaan. Wax ayaa ku dhaca maskaxdooda, iftiin baa soo socda, oo waxay ku andacoodaan inuu Ciise yahay Bixiyahooda. Kuwa kale waxay rumaystaan ​​si tartiib tartiib ah, iyagoo si tartiib ah u garanaya inaysan ahayn badbaadada (inbadan) naftaada ku dhis, laakiin ku dhisi Masiixa.
Si kastaba ha noqotee, Kitaabka Quduuska ahi wuxuu ku qeexaa inuu yahay dhalasho cusub. Haddaynu iimaan ku leenahay Masiixa, waxaynu dhalan doonnaa dhalashada carruurta Ilaah (Yooxanaa 1,12: 13-3,26; Galatiya 1:5,1; Yooxanaa). Ruuxa Quduuska ahi wuxuu bilaabaa inuu ku noolaado (Yooxanaa 14,17), oo Eebbe wuxuu ina dejiyaa abuur cusub (2 Korintos 5,17:6,15; Galatiya). Iskii hore ayaa dhinta, qof cusub ayaa bilaabmaya inuu noqdo (Efesos 4,22-24) - Ilaahay wuu ina beddelaa.
Ciise Masiix - anaguna haddii aan rumeysan nahay isaga - Ilaah ayaa baabi'in doona cawaaqibka dembiga bini-aadamka. Marka la eego shaqada Ruuxa Quduuska ah ee inagu dhex jira, ayaa waxaa la sameeyay bini aadam cusub. Baybalku nooguma sheegin sida ay taasi u dhacdo; kaliya waxay noo sheegeysaa inay wax dhacayaan. Howshu waxay ka bilaabaneysaa noloshan waxaana la dhameystiri doonaa kan xiga.
Hadafku waa in aan noqonno sida Ciise Masiix oo kale. Isagu waa aragtida Ilaah ee kaamilka ah (2 Korintos 4,4: 1,15; Kolosay 1,3; Cibraaniyada), waana inaan isu beddelnaa muuqaalkiisa (2 Korintos 3,18:4,19; Gal 4,13:3,10; Efesos; Kolosay). Waa inaan ku noqonno isaga sidii ruux ahaaneed - jacayl, farxad, nabad, is-hoosaysiin iyo sifooyinka kale ee Ilaah. Tani waa waxa Ruuxa Quduuska ahi inagu dhex sameeyo. Isagu wuxuu cusbooneysiiyaa muuqaalka Ilaah.
Badbaadada waxaa sidoo kale lagu sharaxaa dib u heshiisiin - dib u soo celinta xiriirkeena ilaah (Rooma 5,10: 11-2; 5,18 Korintos 21: 2,16-1,20; Efesos 22; Kolosay). Mar dambe kama hor joogsan doonno ama kama illoobi doonno Ilaah - annaguna waan jecel nahay isaga. Waxaan saaxiibo ka noqonay cadawga. Haa, in kabadan asxaab - Ilaah wuxuu leeyahay wuu aqbalaa annaga carruurtiisa (Rooma 8,15; Efesos 1,5). Waxaan ka tirsan nahay qoyskiisa, oo leh xuquuqaha, waajibaadka iyo dhaxalka cajiibka ah (Rooma 8,16-17; Galatiya 3,29; Efesos 1,18; Kolosay 1,12).
Ugudambeyntii xanuun dambe iyo silic dambe ma jiri doono (Muujintii 21,4), taasoo micnaheedu yahay inuusan qofna khalad sameynin mar dambe. Dembigu mar dambe ma jiri doono, oo dhimashaduna mar dambe ma jiri doonto (1 Korintos 15,26). Hadafkani wuxuu noqon karaa meel fog marka aan eegno xaaladdeena jirta, laakiin safarku wuxuu ku bilaabmayaa hal talaabo - tallaabada aqbalida Ciise Masiix sida Badbaadiyaha. Masiixu wuu dhammaystiri doonaa shaqadii uu inaga bilaabay (Filiboy 1,6).
Ka dibna waxaan noqon doonaa sidii Masiixa oo kale (1 Korintos 15,49:1; 3,2 Yooxanaa). Waxaan noqon doonnaa kuwo aan dhiman karin, aan kala go 'lahayn, oo sharaf iyo dembi lahayn. Jirkayagu wuxuu lahaan doonaa awood ka sarraysa. Waxaan lahaan doonnaa dardaaran, sirdoon, hal-abuur, xoog iyo jacayl aanan hadda ku riyooneyn. Muuqaalka Ilaah, mar haddii uu dembigu xumaaday, wuxuu u dhalaalayaa dhalaal aad u badan sidii hore.